South Asia and Beyond: लोकमानपछि युवराज घिमिरेले किन लगाए डा केसीलाई माफियाको ‘पक्षपोषण’ गरेको आरोप?
लोकमानपछि युवराज घिमिरेले किन लगाए डा केसीलाई माफियाको ‘पक्षपोषण’ गरेको आरोप?
अपरिभाषित ‘मेडिकल माफिया' का विरुद्ध लक्षित उनको आन्दोलनमा ‘ती माफिया' को विरोधमा रहेका तर अर्को निहित स्वार्थ बोकेका प्रतिस्पर्धी ‘माफिया प्रवृत्ति' को उपस्थिति हुन सक्ने सम्भावनाबारे डा. केसी सचेत हुनैपर्छ । यसअघिका आन्दोलनमा केसीकै अनुयायीहरू पनि उनीबाट अलग भएका छन्, विभिन्न चरणमा ।
यसपल्टको घोषित अनशनमा उनका माग पहिलाजस्तै मेडिकल शिक्षा र संस्थानहरूमा र तिनको पारदर्शिता तथा शिक्षाको स्तरीयतासँग मात्र सरोकार राख्दैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको ‘महाभियोग' मागमा सामेल गर्दा के महाराजगन्ज शिक्षण संस्थाका केसी र आयोगबीचको द्वन्द्वमा ढाल नबन्ला ? यदि केसीको अभीष्ट त्यो हो भने उनले त्यसका लागि राजनीतिक दल र सांसदहरूसँग साँठगाँठ गर्ने या समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि महाराजगन्ज शिक्षण संस्थानको प्रांगण र त्यहाँको प्राध्यापकको हैसियतको प्रयोग बर्जित हुनुपर्छ । अर्को उनको अभियानमा संलग्नहरू कुनै ‘मेडिकल माफिया' जगतको कुनै रूपमा पक्षपोषण गरिरहेका छैनन् भन्नेबारे डा. केसी स्वयं आश्वस्त हुनुपर्छ र अरूलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ ।
यो आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीयको अंश हो । सो पत्रिकाले यस अघि यस्तै अर्थ लाग्ने समाचार सामाग्रीहरु पनि छापिसकेको छ ।
यो सम्पादकीयका दुइटा अर्थ हुन सक्छन् । एक, सम्पादक डा केसीको अनशनको शक्ति दुरुपयोग हुने र कसैले आफ्नो लाभका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति चिन्तित छन् र सद्भाववश डा केसीलाई होशियार रहन सुझाव दिंदै छन् ।
दुई, सम्पादकलाई यो अनशन सफल भएमा जसको स्वार्थमा आँच आउने हो, तिनको निकै चिन्ता छ र अनशन शुरु नहुँदै त्यसमा हिलो छ्यापेर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने उनको एजेण्डा छ । अर्को शब्दमा, अहिले जो डा केसीको निशानामा छन्, तिनको कुरा उक्त सम्पादकमार्फत बाहिर ल्याउने काम हुँदैछ ।
यी दुईमध्ये कुनचाहिं साँचो हो, समयले बताइ नै हाल्ला तर अहिलेलाई केही कुरा प्रष्ट भएका छन् र सो सम्पादकीयले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका केही कुराबारे यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ ।
डा केसी कसैको स्वार्थका लागि बसेको भन्ने आरोप नौलो हैन । बरु प्रत्येकपल्ट जसको स्वार्थमा आँच आउँछ, उसले यो आरोप लगाइ नै हाल्छ । शुरुका अनशनहरुमा नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति नबनाइ भद्रगोल पाराले नयाँ मेडिकल कलेज थप्न हुँदैन भन्दा पुराना मेडिकल कलेजको स्वार्थमा आन्दोलन गरेको भन्नेहरु बग्रेल्ती थिए ।
पछि गएर जब नेपालकै कायम मेडिकल कलेजमा शुल्क र सीट संख्या समेतमा कडाइ गरेर तथा मेरिटमा मात्र भर्ना लिएर गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा माग केन्द्रित भयो, नेपालको मेडिकल शिक्ष धराशायी बनाउन लागेको आरोप उहाँमाथि लगाइयो । साथै विद्यार्थी विदेश पठाउनेहरुको स्वार्थमा उहाँ लागेको भन्ने नयाँ आरोप पनि आविष्कार गरियो ।
जब बाहिर समेत अहिले झैं आठ कक्षा मुस्किलले पास गरेर त्यसपछि सर्टिफिकेटहरु किनेका मान्छेसमेत गएर पढ्ने अवस्था बन्द गर्न अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको माग उहाँले गर्नुभयो, नयाँ कुनै आरोप लगाउने ठाउँ रहेन तर आरोप लगाउने क्रम रोकिएन ।
यान्त्रिक पाराले पहिले झैं विनाआधार मेडिकल शिक्षा धराशायी बनाएको भनेर आरोप लगाइरहियो । हिजो निजी मेडिकल कलेजहरुको कार्टेलले निकालेको विज्ञप्तिमा त्यही कुरा कैयौंपटक दोहोर्याएर भनिएको छ ।
सम्पादकीयमा यसरी एजेण्डा हेरी स्वार्थको हिसाबले उहाँको प्रशंसा गर्ने वा खेदो खन्ने मान्छेहरुलाई इ.गित गर्दै ‘विगतका विभिन्न चरणहरुमा केसीकै अनुयायी उनीबाट अलग भएका छन्’ भनिएको छ जब कि सुधारको लक्ष्य राखेर अभियानमा आउने कोही अलग भएका छैनन् । स्वार्थ पुर्तिको लक्ष्य लिएर आउनेहरु अहिले आए भने पनि भोलि आफ्नो स्वार्थमा आँच आउने भयो भने डा केसीसित अलग भइ नै हाल्नेछन् ।
अभियानका लागि यो चिन्ताको विषय हैन किनकि अभियान व्यक्ति वा समुह विशेषको फाइदाका लागि कुनै काम हुन नदिन सचेत र सक्षम छ ।
‘महाराजगञ्ज शिक्षण संस्थानको प्रांगण’ अनशनको प्रयोजनका लागि वर्जित हुनुपर्छ भन्ने वाक्यमार्फत चाहिं सम्पादकले सुझावभन्दा पनि आदेश दिएको प्रतित हुन्छ । त्यसका पछाडि केको प्रभाव हो त्यो पत्रिका नै जानोस् ।
नागरिकका रुपमा आफूले कहाँ, कहिले र के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने व्यक्ति डा केसी आफैंबाहेक अरु को हुन सक्छ? के नागरिकलाई त्यसरी ‘पोलिसिङ’ गर्ने र धम्कीपूर्ण आदेश दिने काम राज्यले अन्नपुर्ण पोस्टका सम्पादकलाई दिएको हो? (हो भने बालुवाटारबाट सञ्चालित राज्यले हो कि टंगालबाट?)
यति जरुर जायज कुरा होः डा केसीको अभियानका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाह र बिरामीको सुविधामा कुनै आँच आउनु हुँदैन । त्यो कुरा हामी समेत भन्छौं र यस खालको चिन्ता पक्कै सम्पादकलाई भन्दा डा केसीलाई छ । यही चिन्तावश सजगता अपनाइएका कारण पछिल्ला ३ चरणमा अस्पतालको सेवा प्रभावित नै नभई अनशन सकिएको थियो ।
सम्पादकीयको अन्तमा डा केसीको अभियानमा संलग्नहरुले ‘मेडिकल माफिया’ जगतको कुनै रुपमा पक्षपोषण गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा डा केसी आफैं आश्वस्त हुनुपर्ने र अरुलाई पनि आश्वस्त पानुपर्ने भनिएको छ । व्यक्ति र घटनाक्रमको आआफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्न हामी सबै स्वतन्त्र छौं तर डा केसीमाथि घुमाइफिराइ भए पनि त्यति गम्भीर लाञ्छना लगाउने दोस्रो व्यक्ति लोकमान सिंह कार्कीपछि युवराज घिमिरे बनेका छन् ।
यो लाञ्छनाको शब्दले जवाफ दिनु जरुरी छैन, लाञ्छना लगाउनेहरुलाई मुख फर्काएर आफ्नै शब्दको ओज घटाउनु पनि आवश्यक छैन । यो विषयमा यति भन्न सकिन्छः समयले सबै कुरा छर्लंग पार्दै जान्छ । आज बल गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा भोलि नबुझुँ भन्दा पनि बुझ्नै पर्ने गरी छर्लंग हुन्छ ।
यति कुरा चाहिं प्रस्ट होस्ः मैदान खुलै छ, खेल शुरु हुन बाँकी नै छ । अनपेक्षित घटनाक्रम भएनन् भने अबको आन्दोलनमा अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुने छैन र आइओएम परिसरमै भए पनि बिरामीको आवतजावतसमेत प्रभावित नहुने ठाउँ खोजेर अनशनस्थल बनाइनेछ । विगतका पछिल्ला अनशनहरुमा जसरी डा केसीको नैतिक बल र समाजका सबै तप्काका मानिसको समर्थन, सद्भाव र सहयोगका कारण अभियान सफलतामा टुंगिएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुनेछ ।
यस अघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी मागहरु जसरी त्यहाँ अनशन बसेर पूरा भएका थिए, अहिले पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरुसित जोडिएका माग त्यहीं बसेर पूरा हुनेछन् ।जसरी पहिले डा केसी त्यहाँ अनशन बस्दा अस्पताल उहाँ र राज्यबीच ढाल बनेको थिएन, उसरी नै अहिले पनि बन्ने छैन । त्यसबाहेक अन्यत्र बस्दा उचित हुन्छजस्तो लाग्छ भने अन्यत्र गएर बस्नु डा केसीको छनोटको कुरा हो, कुनै अमुक व्यक्तिले कसैको आदेशमा उहाँलाई कतै पठाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।
जहाँसम्म समग्रमा सम्पादकीयको नियतको कुरा छ, त्यो धेरै दिन लुक्ने छैन ।
Labels: Annapurna Post, CIAA, Dr. Govinda K C, Journalistic murder, Nepal